Sida loo xariiro internetka meelo fog fog - Geofumadas
Abriil, 2013 Leisure / waxyi, safarka
Waxaan had iyo jeer la yaabi jiray waxaan sameyn lahaa haddii ay tahay inaan tago oo ku noolaado magaalo yar, oo helitaanka isku xirnaanta aan ku raaxeysanno magaalada ay xadidan tahay. Waqti ka badan hiwaayadeena is-dhexgalka ee la soo galay internetka ayaa naga dhigaya inaan aad ulasocono emayl cusub, wararka shabakadaha bulshada ama fariimaha deg degga ah.
Dhowr toddobaad ka hor waxaan awoodey inaan caddeeyo, markii aan aaday fasaxyada ciidaha. Jidkii waxaan ogaaday in seenyaalaha moobaylka uu liito, sidaa darteed modemku weligiis kama jawaabin; in kasta oo xisaabta Roaming ay aniga uun ii imaanayso sidii aan isticmaali lahaa. Markii aan weydiiyay milkiilaha hudheelka buurta yar ee ku saabsan wireless-ka mar labaad wuxuu ii arkay sidii isagoo xayawaan aan caadi ahayn, wuxuu ii sheegay in dadku u yimaadaan inay kala baxaan ... oo igula taliyaan Internet Cafe aniga igu dhawaad ​​daqiiqadaha 45.
Waxa uu ahaa mid xiiso leh in ay ku noolaadaan maalin aan arko mail, goobta comments unmoderated aan Analytics statistics, laakiin waxaan cabsi rabitaanka macaamiisha la filayo ee alaabta ama adeegyada aan ku bixiyeen iyo meesha aan ka jawaabo ee soo socda saacadood 6 noqon kartaa Saxeexa sheeko ama mas'uuliyad daro.
Ka dibna, waxoogaa yaab leh oo noloshu i siisay, waxaan ka helay gabar ka timid Gijón oo ku soo jiidatay jameeco, iyada oo iPad-kiisa ku hadlaya FaceTime; Sida aan ognahay in adeegani u baahan yahay adeegga internetka, waxaan u soo dhawaaday isaga oo u dhammeeyey waxbarashada wax ka badan wixii aan filayay.
Sannado ka hor, waxaan u maleyneynaa in aan heli karno helitaanka adeegga rakibaadyada satellite-ka inaysan aheyn wax aan macquul ahayn laakiin qaali ah. Fikradda in hadda la gaari karo qiimaha oo ka bilaabma € 24,90 Euro bil kasta ayaa na yaaba; Tani waa sababta oo ah tiknoolijiyada waxay samaysay cabsi weyn inkastoo xaqiiqda ah in mabaadiida ay aad u la mid tahay gudbinta telefoonka caadiga ah, oo hadda ay bixiso Internet, Telefishin iyo Telefoon isla qorshe.
Waxay ku saabsan tahay Khadka macaamiisha dijitaalka ah ee asymmetric, oo loo yaqaan 'acronym' ee ingiriiska ADSL (Khadka Caawinta Asymmetric Digital Subscriber Line), halkaasoo casriga cusub ee loo yaqaan DSL la soo dejiyey oo la gudbinayo xogta asalmacaarka kaas oo kuu ogolaanaya inaad la ciyaarto jihada si aad u hesho signal joogto ah; taas oo ka soo horjeeda calaamadda caadiga ah ee taleefanka taas oo tani ay horseedi lahayd koontooyin adag oo ah dhammaadka bisha.
Suuqa hadda waxaa jira laba siyaabood oo loo helo xayeysiis ah adoo adeegsanaya satellite:
Iyadoo loo marayo nidaam isku mid ah. Tani waa ku fiican tahay haddii aad rabto inaad qandaraas gaar ah u adeegto internetka telefoonka.
In kiiska ee Spain SkyDSL waxay bixisaa adeegyo bil kasta ka 24,90 € degdeg ah 1,5 Mbit / s, oo waxaan u malaynayaa in la aqbali karo, haddii loo arko in Internet ma aha jeedinaaya in ay carruurta ka soo jeeda videos on Youtube ka dib markii shaqada guriga, laakiin qalab lagula xiriiro akadeemiyadda ama habdhaqanka ganacsiga.
Khasaaruhu wuxuu had iyo jeer ku jiraa xadka ugu weyn ee aan rabno marka la barbardhigo xadka / kor u kaca. Guud ahaan, downloadku wuu ka sarreeyaa gaabinta laakiin waxaa jira kiisas gaar ah sida marka aan isticmaalno FTP si aan ugu gudbino macluumaadka serverka.
Iyadoo loo marayo hab nidaamsan. Xaaladdan oo kale, modem gaar ah ayaa loo isticmaalaa, iyadoo leh qiime badan oo la aqbali karo haddii aan tixgelinno taas xayeysiis ah adoo adeegsanaya satellite sida SkyDSL ee sicirka Heerka S wuxuu bixiyaa 6 MB download ee kaliya 39.80 Euros. Ku dhowaad isku qiimo la mid ah Quantis.
Sannado badan, markii aan xasuusto niyadjabinta tayada liidata ee xun marka la fulinayo nidaamyada cadastarada ee degmooyinka, waxaan qabaa inaan hadda helno fursado badan oo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, tiknoolajiyadu waxay hagaajiyeen awooddooda si ay ugu adeegaan macluumaadka adeega shabakadda oo aysan ahayn feylasha qeydhin ama adeegyadda gawaarida
Mid ka mid ah xaddidaadyada ayaa had iyo jeer ahaa in antenna iyo qalabyada ay adagtahay in la helo; ka dibna waxay noqdeen kuwo aan waxba galabsan. Waqtigan xaadirka ah adeeg bixiyayaashu waxay bixiyaan qalab ijaar ah ama deebaajig ah oo aan lahayn maalgelin.
Sidaa darteed, haddii aad ka fekereyso inaad ka fariisato beertaada oo aad ka baqeyso in la joojiyo ... maaha isticmaalka la-taliyeyaasha maxalliga ah xayeysiis ah adoo adeegsanaya satellite.
La daabacay Blog
Post Previous«Previous GPS ee Android, SuperSurv waa GIS kale weyn
Post Next Waa maxay gvSIG version 2.0 cusubNext »